Miyuu Cristiano Ronaldo ku biirayaa Bayern Munich? … (Macallin Carlo Ancelotti ayaa ka jawaabaya) – Gool FM
Miyuu Cristiano Ronaldo ku biirayaa Bayern Munich? … (Macallin Carlo Ancelotti ayaa ka jawaabaya)
(Munich) 13 Luuliyo 2016 – Tababaraha kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Carlo Ancelotti ayaa qirtay inaysan ahayn wax macquul ah in kooxdiisa cusub ay garoonka Allianz Arena keento Cristiano Ronaldo.
Macallin Ancelotti ayaa xiriir dhow la leh Ronaldo, iyadoo labadan shaqsi ay wada joogeen kooxda Real Madrid, waxaana tababaraha reer Talyaani uu sheegay inuu ka dhigi lahaa dalab hami wayn, haddii ay la soo wareegi lahaayeen xiddiga xulka qaranka Portugal xagaagan marka uu furmo suuqa iibka xiddigaha, laakiin taasi aysan suurto gal ahayn.
Tababarahan qibradda leh ayaa ammaanay dabeecadda xirfadeed ee Ronaldo, laakiin waxa uu qirtay inay adag tahay in la la saxiixdo 31 sano jirkaan.
“Waan jeclahay sida xirfadlenimada ah ee uu u dhaqmo” ayuu Ancelotti u sheegay wargeyska Bild, waxaana uu raaciyey: “Suxufiyiin badan ayaa i waydiiya sida ay u adag tahay in la la shaqeeyo xiddigo sida Zlatan Ibrahimovic ah, laakiin way fududahay.”
“Wax waliba waa ay ka dhici karaan kubadda cagta, laakiin aad ayey u adag tahay inaad ku aragto ciyaaryahan sida Ronaldo ah koox kale.”
Ronaldo ayaa la soo warinayaa inuu garoomada ka maqnaan doono afarta ama shanta bilood ee soo aaddan, kaddib markii uu dhaawac jilibka ah ka soo gaaray kulankii final-ka EURO 2016.
Thierry Henry oo dalabyo ka helaya kooxo ka dhisan London, kaddib markii laga cayriyey shaqadii uu ka hayey kooxda Arsenal